न रहे आमाबुवा, न रह्यो घर: विचल्लीमा छोरीहरु ! – Taja Khawar
न रहे आमाबुवा, न रह्यो घर: विचल्लीमा छोरीहरु !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ १३, २०७८ समय: ११:१६:३२
प्यूठान : नौवहिनी गाउँपालिका १ चौतारा स्याउलीवाङ प्यूठानका ३८ वर्षिय बोम बहादुर मल्लको खरले छाएको झुपडी । गुजाँरा त जसोतसो धानेका उनलाई घरमा जस्तापाता लगाउनु सपनाजस्तै थियो । तर, जस्तापाताले घर रंगाउने उनको सपनालाई साकार पार्दै थियो नौवहिनी गाउँपालिकाले । विपन्न घरमा जस्तापाता लगाउने कार्यक्रम अन्तर्गत मल्लले पनि शुक्रवार त्यसको चाँजोपाजो गर्दै थिए ।
पुरानै घरमा जस्तापाता लगाउन नमिलेपछि उनले एक हात जति गारो लगाउँदै थिए । त्यसका लागि ढुंगा जम्मा गरेर राखेका थिए । शुक्रवार खाना खाएर उनी सहित ३३ वर्षिय श्रीमती गमी मल्ल र ढाई वर्षका छोरा मेघराज मल्ल सँगै सुते । तीन बहिनी बहिनी छोरीहरु अर्को कोठामा र जेठी छोरी मामा घर गएकी थिइन् ।
सँगै सुतेका श्रीमान, श्रीमती र ढाई वर्षका छोरालाई घर बनाउन राखेका ढुंगाले च्याप्यो । माथीको तला नै भत्किएर उनीहरुलाई चापेर तीनै जनाको मृत्यु भयो । अर्को कोठामा सुतेकाले तीन बहिनी छोरीहरु बाँच्न सफल भए ।
पाँच सन्तान र श्रीमतीको पालनपोषण मल्लले मजदुरी गरेर चलाएका थिए । अर्घाखाँचीमा घर बनाउने मिस्त्री काम गर्दथे मल्ल । गाउँपालिकाले जस्तापाता दिएपछि खुसीले उनी घर छाउन आएका हुन् । जस्तापाताले रंगिएको घर देख्न त पाएनन् नै नावालक चार छोरीहरुलाई विचल्लीमा पारेर मृत्युको मुखमा परे ।
जेठी छोरी कुमारी मल्ल १५ वर्षकी भइन् । ६ कक्षामा पढ्छिन् । १२ वर्षिय करिष्माले तीन कक्षा, ९ वर्षिय साइली गंगाले दुई र ७ वर्षिय कान्छी छोरी सपना मल्लले एक कक्षामा पढ्दै छन् । बुवा, आमा र कान्छो भाईको मृत्युपछि उनीहरु बेसहारा बनेका छन् । मामा घर गएकी जेठी छोरी कुमारीले घर आउँदा बुवा, आमा र भाईलाई घरभित्र पुरिएको अवस्थामा देखेपछि गाउँलेलाई खवर गरेकी थिइन् । उनको घर एकान्तमा भएकाले गाउँलेले उनीहरुलाई उद्दार समेत गर्न पाएनन् ।
उनीहरुको अहिले न बस्ने बाँस छ , न सहाराका लागि बुवा आमा । बाल्खैमा उनीहरु बेसहारा बनेका छन् । ‘बिचल्ली छोरीहरुलाई कसको जिम्मा लगाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्दैछौ’,वडा अध्यक्ष शेर बहादुर सेनले भने,‘भत्किएको घर बनाउन वडा कार्यालयले अगुवाई गर्छ ।’
Last Updated on: May 27th, 2021 at 11:16 am